Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo si kulul uga hadlay shirka maamul-gobaleedyada ee Kismaayo +VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo si kulul uga hadlay shirka maamul-gobaleedyada ee Kismaayo +VIDEO
Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo dhawaan uu wareysi la yeeshay wariye Durraan Cabdullaahi Shurwac ayaa si kulul uga hadlay shirka magaalada Kismaayo dhawaan uga furmay maamul-gobaleedyada.
Waxaa Xildhibaan Yuusuf uu shirka Kismaayo ku tilmaamay mid aan sharci ahayn, kaasoo eedayn culus u jeediyay madaxda maamul-gobaleedyada ee halkaas ku shirsan.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf waxaa wareysigiisa uu aad ugu dhaliilay oo ka soo hor jeestay nidaamka fedaraalka ah, kaasoo madaxda maamul-gobaleedyada ku sheegay inay yihiin kuwa ka shaqeeynaya danaha shisheeya oo doonaya inaanay Soomaali waligeed isu imaan.
Waxaa xildhibaanku uu sheegay in bulshada soomaaliyeed aanay qaadan karin nidaamka fedaraalka ah, kuwaasoo aan ahayn qowmiyado kala duwan oo dhiig iyo dhalasho ku kala qaybsan, hase yeeshee fedaraalku yahay mid ay shisheeyahu u keeneen oo ku kale qaybinayaan dadka Soomaaliyeed oo hal qowmiyad ah.
Ugu dambayntii waxaa xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf uu umadda soomaaliyeed kula dardaarmey inay iska daayaan qabyaaladda oo u hoggaansamaan midnimada iyo qaranimada soomaaliyeed, isla markaana ay ka soo haraan nimanka maamul-gobaleedyada sheegta ee qabyaaladda ku dhisan.